Tag: vidiny isaky ny mitarika | Martech Zone
Tag: vidiny isaky ny mitarika
Asabotsy, Jona 21, 2014 Alahady, Jona 22, 2014 Douglas Karr
Fony aho nandinika voalohany ity sary ity dia somary nisalasala aho fa maro ny metrika very… saingy mazava ny mpanoratra fa nifantoka tamin'ny fampielezana marketing nomerika izy ireo fa tsy paikady ankapobeny. Misy metrika hafa izay jerentsika amin'ny ankapobeny, toy ny isan'ireo teny lakile filaharana sy laharam-pahamehana, fizarana ara-tsosialy ary fizarana ny feony… fa ny fampielezan-kevitra matetika dia misy fanombohana sy fijanonana voafetra ka tsy ny metrika rehetra no azo ampiharina.
Pardot dia nanambatra ity takelaka fisolokiana momba ny marketing ity izay efa nivezivezy. Mahery ny analytics momba ny varotra ankehitriny. Ny mpivarotra dia manana alalana amin'ny karazana metrika rehetra, manomboka amin'ny fahitan'ny pejy sy isan'ny mpankafy hatramin'ny statistika misimisy kokoa momba ny fitarihana sy ny varotra. Miaraka amin'ny mangarahara eo amin'ny angon-drakitra momba ny varotra, mora ny manarona ireo angon-drakitra izay - matetika kokoa noho ny tsy - tsy misy fiantraikany amin'ny vola miditra aminao. Ireo mpivarotra dia mila mifantoka